NY ORINASA NY FANAMPIANA ARA-DALÀNA
ORINASA NY FANAMPIANA ARA-DALÀNA
Efa niforona ny ekipa matihanina mpahay lalàna ary mpisolovava izay isan ‘andro hiaro ny Mpanjifa’ zavatra mahaliana sy hiarovana ny zon’olombelona.
Olom-pirenena (ara-batana olona) dia manolotra fanampiana ara-dalàna na tsy vola — tsotra fakan-kevitra tanteraka vahaolana ny olana ara-dalàna raha tsy misy ny fandraisana anjara amin’ny Mpanjifa dingana.
Fikambanana (olona ara-dalàna), dia manolotra ny vahaolana mivantana tojo olana ara-dalàna sy ny orinasa ny asa fanompoana, izay ahitana ny zava-drehetra izay azo atao ara-dalàna ny asa manontolo.
Rehetra ny mpiasa dia voamarina manam-pahaizana manokana amin’ny ambony momba ny lalàna sy ny asa ny traikefa isan-karazany ny fikambanana ara-dalàna ny sehatry ny (fitsarana, ny mpampanoa lalàna, ny Raharaha anatiny ny vatany), izay foana ny fanatsarana ny fahaiza-manao tsy amin’ny alalan’ny fiaraha-miasa eo amin’ny famahana ny olana ny Mpanjifa izy, nefa koa amin’ny alalan’ny fandraisana anjara amin’ny matihanina ara-dalàna ny sehatra fiadian-kevitra sy ny fihaonambe.
MANAO NY MARINA SY TSY MIVADIKA
Ara-dalàna ny fikambanana nandray ny fitondrana ny fampiharana ny extorting vola avy amin’ny mpanjifa, isaky ny famoronana an’eritreritra olana izay mitaky fanampiny fandoavam-bola, afa-tsy manemotra fotoana fanapahan-kevitra efa misy olana ara-dalàna.
Ny ara-dalàna ny asa dia tsy mitaky Anao mba tsy ilaina ny vola lany.
Ny olana dia natao amin’ny fomba hentitra, araka ny fifanekena momba ny fanaovana ho ara-dalàna ny asa
Tatitra momba ny asa ny vokatra dia hita ao amin’ny ny fangatahana.
NY FAHAZOANA SY NY INTELLIGIBILITY
Ny tena fitsipiky ny asa -«ny asa raha ny marina, na inona na inona mihoatra», izany hoe, rehefa nahazo torohevitra araka ny lalàna aloha ny mianatra raha toa ka azo atao mba hamaha Ny olana ary, raha azo atao, dia hahazo mazava tsara ny tolo-kevitra sy ny algorithm ny hetsika ho amin’ny fanapahan-kevitra ny fanontaniana.
Eo am-pamaranana ny fifanarahana amin’ny fandikana ny tolotra ara-pitsarana, ny mpisolo vava tsotra, sy mazava ary hazavao ny Anao inona no hatao, inona no ampaham-potoana ary inona no vokatr’izany rehetra nanaiky ny hetsika
Lova tsy dia: fomba fampiharana